सेप्सिस दिवसमा र्‍याली : धेरैको ज्यान लिन सक्ने सेप्सिस के हो?
काठमाडौं- आज विश्व सेप्सिस दिवस काठमाडौंमा पनि मनाइएको छ। दिवसको अवसरमा त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जबाट र्‍याली निकालिएको थियो। सेप्सिसको विषयमा जानकारी दिन अस्पताल परिसरबाट नारायणगोपाल चोकसम्म र्‍याली निकालेर पुन अस्पतालमा फर्किएको थियो।
र्‍यालीमा डाक्टर, मेडिकल विद्यार्थी, नर्स लगायत सहभागी थिए।
डाक्टर सुवास आचार्यका अनुसार क्यान्सर र एड्स भन्दा भयावह र तीव्र गतिमा फैलिरहेको सेप्सिसले विश्वमा हरेक ३ देखि ४ सेकेन्डमा एउटा बिरामीको ज्यान लिन्छ। सेप्सिस के हो? मेडिकल शिक्षा पाएका कति चिकित्सकले समेत यो विषयमा जानकारी प्राप्त गर्न सकेका हुँदैनन्। आम जनतामाझ त यो झन् ‘के हो, के हो?’ जस्तो भएको छ।
World Sepsis Day 2018@NSCCMOfficial @CCNANOfficial #WorldSepsisDay #SepsisWalk #SepsisAwareness pic.twitter.com/bDQSlRsYoM
— NCCDF (@NCCDF) September 13, 2018